Prosper & Peace: November 2009
ရုံးက ကွန်ပြူတာကို သုံးလာတာ အလုပ် စ၀င် ကတည်းက ဆိုတော့ ၅နှစ် ကျော်ပါပြီ။ ကိုယ့် အရှေ့ကလူ သုံးခဲ့တဲ့ စက်ကိုပဲ ဆက် သုံးတာပါ။ ဘယ်တုန်း ကမှ ဘာ ဒုက္ခမှ မရှိ ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း သတိ ရှိရှိနဲ့ စက်ထဲကို ပေါက်ကရ မထည့်ဘူး။ မှန်မှန်လည်း backup လုပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ယုယု ယယ သုံးလာတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ပတ် လောက်ကတော့ outlook သုံးရင် စက်က ကြောင်ပြီး ဘာမှ မတက် တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ အိုင်တီ မန်နေဂျာကြီးကို အပ်လိုက်တယ်။ မနက်ကနေ ညနေထိ စာမလာ သတင်း မကြားလို့ လိုက်မေးကြည့်တော့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ က သုံး မရ တော့ပါဘူးတဲ့။ ဘာလို့လည်း ဆိုတာလည်း အဖြေ မရှိ ပါတဲ့။ မှတ်ကရော။ အဲ့သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကိုယ် အလုပ် စလုပ် ကတည်းက ကိုယ့်စက်ကို ဘယ် ဆရာနဲ့မှ မပြဘူး။ သူ့ဆီ မအပ်ခင် ပြဿနာက outlook တခု ထဲရယ်။ IP address တွေ ဘာတွေ ထည့်ရတာ ဆိုတော့ သူ့ အလုပ်မို့လို့ လွှဲအပ် လိုက်တာ တကယ့်ကို လွဲသွား တာပါပဲလား။
မန်နေဂျာကြီးက ကိုယ့်စက်ကို သိမ်းပိုက် ထားလိုက်ပြီး အရံ စက်တလုံး လာပေးထားတယ်။ ကိုယ့် data တွေတော့ မပါဘူးပေါ့။ ကိုယ့်တို့ရဲ့ ဆရာမကြီးကတော့ အရမ်း စိတ်ပူပြီး ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ ကွန်ပြူတာပျက်သွားတာ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ တဲ့။ သူ့ အလှည့် ရောက်ပြီဟေ့ ဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ အိုင်တီ မန်နေဂျာကြီး ကလည်း ဒီ ကွန်ပြူတာဟာ လဲဖို့ သင့်နေတာ ကြာပြီပေါ့ လဲချိန် တန်ချိန်မှာ မလဲတာကြောင့် အခုလို ဖြစ်ရတာ လို့ ထပ်ဆောင်း ပြောပေးတယ် (ဘယ်အချိန်ထဲက ပြောချင်နေသလဲတော့ မသိဘူး)။ ကိုယ့် data တွေ မရှိတဲ့ စက်ကို သုံးရတာ ကိုယ်လက် အင်္ဂါ မစုံ သလို ပါပဲ။ မန်နေဂျာကြီး သိမ်းဆည်း လိုက်တဲ့ အတွက် သူ့ဆီမှာတော့ ကိုယ့် data တွေ ရှိနေတယ်၊ လိုချင်ရင် သူ့ဆီ တောင်းရတယ်။ ကိုယ့် အရံ စက်ထဲကို အခု data တွေ ထည့်လိုက်ရင် နောက် စက် အသစ် ရောက်လာရင် ပြောင်းထည့်ရမှာ ရှူပ်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြချက် နဲ့ပေါ့။ အခု သုံးနေတဲ့ စက်ကိုပဲ ပေးပါ ဆိုတော့လည်း မရဘူးတဲ့။
ကိုယ်က ငိုမဲ့မဲ့ လုပ်လေ သူက ပိုဆိုးလေပဲ။ စက်က ပိုးထိတာ လို့ လည်း ပြောတော့ ဘာကြောင့် ကိုယ့်စက်မှာ anti-virus အသစ် မရှိသလဲလို့ မေးတော့ သူ့ဘက် လှည့်တယ် ထင်ပြီး ခုခံ ပြောဆိုတာ နာရီဝက်လောက် ကြာသွားတယ်။ နောက် တခါ ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ် ရမလဲ လို့ မေးတဲ့ အခါ ကျတော့ အက်ဖ်ဘီအိုင်တို့ စီအိုင်အေ တို့တောင် ကာကွယ်လို့ မရဘူးဆိုပဲ။ ကိုယ်လည်း စိတ် ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရှင် က ကိစ္စသေးသေး မှန်သမျှကို ကြီးကြီး မားမား ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ နေရာမှ ပါရဂူပဲလို့ ပြောချ လိုက်တယ်။ တခါမှ မပြောဖူး ပေမယ့် မခံ နိုင်လို့ ပြောလိုက်တာ။ ကိုယ် အလုပ် မဖြစ်လေ သူ ပါဝါ တက်လေ ဖြစ်နေ တာကိုး။ သူ လုပ်ပေးမှ ရမယ့် သဘော။
ကိုယ်တို့ ရုံးမှာ လူ အယောက် ၂၀လောက် ရှိပါတယ်။ သူတလူ ငါတမင်း ပါဝါတွေ ပြကြလွန်းလို့ ဘယ်သူက ဆရာ ဘယ်သူက တပည့်လဲ ဆိုတာ မသိနိုင် လောက်အောင် ပါပဲ။ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်တာနဲ့ ရသလောက် တန်ခိုးတွေ ထုတ်ပြ ကြတာပဲ။ အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံ ပါဝါစုံ အလုပ် စ၀င် ကတည်းက လှိမ့်နေအောင် ခံရဖူးတယ်။ လုပ်သက် ကြာလာတော့ လူတွေရဲ့ စိတ် အရောင်စုံ တွေကိုလည်း ပိုသိလာတယ်။ တချို့က ဘယ်သူ့ကို မဆို တန်းတူ ဆက်ဆံ တတ်သလို တချို့ကတော့ အထက်ဖား အောက်ဖိ ဆိုတဲ့ အထဲ ပါပါတယ်။ ၀င်စ ကတော့ အရမ်း စိတ်ညစ်တယ်။ ကိုယ့် ကိုယ်ကို မခုခံ တတ်ဘူး။ အိမ်ပြန်လာပြီး စိတ်ညစ်ရတာ အမြဲပဲ။ ကြာလာတော့ ဗိုလ်ကျ တဲ့သူ ဘယ်သူဆိုတာ သိပြီး ခပ် ရှောင်ရှောင်ပဲ နေလိုက်တယ်။ အမှန်ကတော့ မဟုတ် မခံ ဗိုလ်ကျ တဲ့သူကို ပြန်ချဲ သင့်တာ။ ပြန် မပြောရဲတဲ့ အတွက် အဲ့ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ အလုပ်ထဲမှာ အမြဲ ဝေဖန် ခံရတယ်။ ပြန် မပြော ရဲတာက အရိုးစွဲနေပြီး အလွယ်တကူနဲ့ ဖျောက်ပစ်ဖို့ ခက်သား။ ကိုယ်မှန်ရင် ပြန် ပြော ရဲဖို့ ဖြေးဖြေးချင်းတော့ ကြိုးစား နေပါတယ်။
မန်နေဂျာကြီး ပါဝါပြချင်နေတာကိုတော့ သိပါတယ်။ ကံကောင်း တာက (သူ မသိရှာ တာက) ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ် တော်တော် များများက အင်တာနက် ကတဆင့် သွားတာ ဆိုတော့ အိနြေ္ဒ မပျက် အလုပ် လုပ်လို့ ရနေတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်လည်း စက်ကြီး တခုလုံး ပျက်သွားလို့ ပြန် မရတော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ပဲ နေလိုက်တယ်။ တကယ်လည်း သံဝေဂ ရပါတယ်။ ပစ္စည်း သင်္ခါရ လူ သင်္ခါရ ပဲလေ။ ဒီနေ့လည်း ကိုယ် အလုပ် မသွားဘူး။ သတင်း ကြားတာကတော့ ကွန်ပြူတာကို dell က မှာတာ မရလို့ တခြား နေရာ က မှာရမယ်တဲ့။ ကွန်ပြူတာ တလုံး ၀ယ်ဖို့ ဒီလောက် ခက်ခဲ နေတာ အခုမှပဲ ကြားဖူးတယ်။ ခရစ်စမတ် ရုံးပိတ်ရက် မတိုင်ခင် ရောက်လာ မလားလို့ စောင့်ကြည့် ရဦးမယ်။
Posted by မီယာ5comments: Links to this post
အိမ် ပြောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀ိုင်း အကြံဉာဏ် ပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်တဲ့ အကြောင်း ပြောချင် ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ကို ဘေးနားမှာ လာ ၀ိုင်းကူ ပြောပေး နေသလိုပဲ။ အိမ်က တယောက်ကို ကော်မန့်နဲ့ စီဗုံးမှာ ဖတ်ရ တာတွေကို ပြောပြ မိတယ်။ ပျောက်နေတဲ့ ဇနိမောင်နှံ ကတောင် အိမ် ပြောင်းတာ အဆင်ပြေ ပါစေလို့ အီးမေးထဲ ပြောလာတော့ အားလုံး သတိတရ ရှိကြတာ တကယ်ပဲ ကျေးဇူး တင်တယ်။ မိသားစု မောင်နှမတွေ လိုပဲ အားပေး ကြတာ အားရှိ စရာပါ။ အိမ် ပြောင်းတဲ့ နေ့မှာ ရာသီဥတုက သိပ်မဆိုးလို့ အားလုံး အေးအေး ဆေးဆေးပဲ ပြီးသွားတယ်။
နှစ်ယောက်သား ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို သိမ်းဆည်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ သယ်စရာတွေ များသား။ ပရိဘောဂ ဘာမှ မပိုင်ဆိုင် လို့သာ တော်တော့တယ်။ မီးဖိုချောင်မှာ ရှိတဲ့ အိုးခွက် ပန်းကန်တွေလည်း မရှိဘူး ဆိုပေမယ့် စက္ကူဗုံး တဗုံးတော့ ရှိတယ်။ ပန်းကန် ခွက်ယောက်ကို ၂ခုစီပဲ ၀ယ်နေကျမို့ အစုံလိုက်ရှိတာပဲ ထည့်သိမ်း တော့တယ်။ ပစ္စည်းတွေ ထုပ်သိမ်း ပြီးတာနဲ့ သန့်ရှင်းရေး အကျအန လုပ်ရတယ်။ ကိုယ် ပြောင်းသွားပြီး သန့်သန့် ရှင်းရှင်း ချန်ထား ခဲ့ချင်တာလေ။ ရေချိုးခန်း အိမ်သာကို ပြောင်လက် နေအောင် ယောကျာ်းက တိုက်ချွတ် ဆေးကြောပြီး မီးဖိုချောင် ကိုတော့ လင်မယား နှစ်ယောက် တူတူ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတယ်။ မြန်မာ အစားအစာတွေ ချက်ပြုတ် ကြော်လှော် စားတဲ့ အကျိုးကတော့ ၂နာရီလောက် တိုက်ချွတ် လိုက်ရတာပေါ့။
အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက် စကားပြောတော့ အခန်းကို သပ်သပ် ရပ်ရပ် ထားခဲ့ပေးတဲ့ အတွက် ကိုယ်တို့ကို ချီးမွမ်း စကား ပြောပါတယ်။ ဗြိတိသျှ တွေနဲ့ မတူဘူးဆိုပဲ။ ၈နှစ် သူတို့ နဲ့ နေခဲ့တာ ဆိုတော့ ကိုယ်တို့ အကြာဆုံးပဲ ထင်ပါတယ်။ အိမ်ရှင် အဟောင်းကို လိပ်စာ အသစ် ပေးပြီး နှစ်ယောက်သား နေရာ အသစ်ကို ပြောင်းခဲ့ ကြတယ်။ အိမ်သစ် ရောက်တော့ သန့်ရှင်းရေး နဲ့ စ ရ ပြန်ရော။ ကိုယ်တို့ မပြောင်းခင်မှ အိမ်ရှင်က ရေချိုးခန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ကို အသစ်ထည့်တော့ ဆောက်လုပ်ရေး သမားတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ တအိမ်လုံး ဖုန်ထူပြီး ပစ္စည်း တွေဆိုလည်း မဲသဲ နေတော့တာပဲ။ အိမ်ရှင်က ကုတင် မပေးတော့ ကုတင် ၀ယ်ရတယ်။ ကုတင် အမျိုး ကလည်း စုံသလား မမေးနဲ့။ တခါမှ မ၀ယ်ဖူးတဲ့ ပစ္စည်းမို့ ထုံးစံ အတိုင်း သူများ တွေကို မေးပြီး သင့်မယ် ထင်တာ ၀ယ်လိုက်တာ ဘာမှကို ထပ် မ၀ယ်နိုင် တော့ဘူး။ ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခု တိုး လာတာပေါ့လေ။
ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ နေရာ ချလိုက်တော့ အိမ် သေးသေး လေးလည်း တခါတည်း ပြည့်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် နှစ်ယောက်တည်း နေတာ ဆိုတဲ့ အသိစိတ် တခု ထဲနဲ့ပဲ အတော်လေး စိတ် လွတ်လပ် ပါတယ်။ ခြေဆန့် လက်ဆန့် လုပ်လို့ရတဲ့ ဧည့်ခန်းလေး တခုလည်း ပါတော့ အိမ်နဲ့ ပိုတူ သွားတာပေါ့။ အိမ်နဲ့ အမြဲ နေနေရတဲ့ သူတွေ အဖို့ ဘာမှ မထူးဆန်း ပေမယ့် ကိုယ်တို့ အတွက်တော့ ကိုယ် မပိုင်တဲ့ အိမ်ကလေးမှာ သီးသန့် နေရတာ တကယ်ပဲ ကံကောင်းတယ် လို့ ယူဆ ပါတယ်။ အိမ်သစ်တက်ပွဲတော့ မလုပ်ရသေးဘူး။ စပါယ်ရှယ် တခုခု ချက်ပြီး အားလုံးကို ထပ်ဖိတ်ပါ့မယ်။
Posted by မီယာ 11 comments: Links to this post
အပြောင်း အရွှေ့ အတွက် ကြုံရသမျှ
ခုထိ အိမ် မပြောင်း ရသေးပါ။ သတိတရ အကြံ ပေးကြတာ အရမ်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ နှစ်ယောက်တည်း နေချင်တာနဲ့ အိမ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးတာ ဘုမသိ ဘမသိ။ မနုသွဲ့ ပြောတာတွေတော့ အသေအချာ မမေ့အောင် လုပ်ဖို့ စာရင်း တို့ထားတယ်။ စိတ်က ဘယ်လောက်တောင် ပျော့သလဲဆိုတော့ အိမ်သစ်ကို ပြောင်းချင် စိတ် မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်ကို လှည့်ပတ် ပြတော့ အိမ်ရှင်က မီးဖိုချောင်ရော ရေချိုးခန်းပါ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေ ထည့်ထားတဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ကျောက်ပြား အစစ် ခင်းထားတာနော် လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဒါတွေကို လုံးဝ စိတ် မ၀င်စားပါဘူး။ ကျောက်ပြား အစစ် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကိုယ့်တာဝန်က သန့်သန့် ရှင်းရှင်း နေဖို့လို့ပဲ မှတ်ထားပါတယ်။ ရေချိုးခန်းကို လှည့်ပတ်ပြတော့ အိမ်ရှင် မိန်းမက ကြွေခွက်မှာ ပဲ့ရာလေး တခုကို ကိုယ်တို့ အရှေ့မှာပဲ တွေ့သွားတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ မဟုတ်ရင် ကိုယ်လုပ်လို့ ဖြစ်တာဆိုပြီး လျော်ရမှာ။ အိမ်ကို ပြပြီးတာနဲ့ စာချုပ် အကြမ်းကို ဖတ်ဖို့ ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့ ဘက်က အကာ အကွယ် ယူထားတာ တွေတော့ တပုံကြီးပဲ။ သိတဲ့လူတွေ ပြကြည့်တော့ အရေးကြီးတဲ့ အချက် ၂ချက် ထောက်ပြ ကြတယ်။ စရံငွေကို တရား မ၀င် ယူလို့ မရတဲ့ အကြောင်း နဲ့ လိုက်ကာတွေ ကော်ဇောတွေကို သန့်ရှင်းရေး ကုမ္ပဏီတွေ အပ်တာ ဈေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ စာချုပ်ထဲမှာ ရေးထားတာက သက်တမ်း ပြည့်လို့ ပြောင်းမယ် ဆိုရင် လိုက်ကာတွေ ကော်ဇောတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခ ပေးရမယ် လို့ ပါတာကိုး။ ကိုယ်လည်း စိတ်ပျော့တယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ် တက်မနေခင်မှာ ကျော့နေအောင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားတဲ့ အရိပ်အရောင် မတွေ့တော့ နဲနဲတော့ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ အိမ်ငှား ဘ၀ မလွယ် ပါလား ပေါ့။
အိမ်ရှင်က ကိုယ်တို့ကို တနှစ်ထက် ပိုနေရင် လိုက်ကာနဲ့ ကော်ဇောတွေ အသစ်လဲ ပေးမယ်လို့ ဆိုလာပြန်တယ်။ ၀မ်းသာ အားရနဲ့ ကိုယ်ကလည်း ကျေးဇူး တင်လိုက်တာ ပေါ့။ တနှစ် မက နေဖြစ်မှာပါ အသစ်တွေ လဲ ပေးရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ လို့ ပြောမိတာ အမလေး ရင့်ရင့်သီးသီး ပြန်စာ ပို့လာတယ်။ မင်းတို့ကို မီးဖို ရေချိုးခန်း အသစ် ပေးထားတာ တော်လှပြီ ဆိုပဲ။ ဒါတွေပဲ ရမယ်တဲ့။ တကယ် စိတ်ကုန် သွားပြီး ဘာ ဆက်လုပ် ရမယ် မှန်းတောင် မသိဘူး။ စိတ်တွေတော့ လေးတာ အမှန်ပဲ။ စာချုပ် လက်မှတ် ထိုးတဲ့ နေ့ရောက်တော့ အိမ်ရှင်က စပြီး စရံငွေကို သူ မသိမ်းထားဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတယ်။ deposit protection service မှာ သိမ်းထားဖို့ အဆိုပြုတော့ ကိုယ်တို့ ဘာမှ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ လက်မှတ် မထိုးခင် ကိုယ်က သန့်ရှင်းရေး အကြောင်း မေးလိုက်တော့ အိမ်ရှင်က ဘာပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားပုံပဲ။ ဘယ်မှာလည်း ပြပါတဲ့။ ကိုယ်တို့လည်း စာချုပ်ကို ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ အလျော့ မပေးချင်တာနဲ့ နှစ်ယောက်သား စေ့စေ့ စပ်စပ် ရှာကြတာ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာမှာ သွားတွေ့တယ်။ သူ့အိမ်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်တော့ ဘာ သန့်ရှင်းရေးမှ မလုပ်ထားပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူက professional ဆိုတာ ဖြုတ်လိုက်ပါ ဆိုပြီး စာချုပ်မှာ ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။
ခုထိတော့ သော့ မရသေးပါဘူး။ ရာသီဥတု စစ်ကြည့်တော့ ပြောင်းမယ့်နေ့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာမယ်တဲ့။ ဒီကြားထဲ အိမ်ပြောင်းဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ အင်တာနက်ထဲ လိုက်ဖတ် ကြည့်နေသေးတယ်။ အယူသည်း လွန်းတာ မဟုတ်ပေမယ့် အမှား အယွင်း မရှိအောင်လို့ပါ။ ဖတ်မိတာ တခုက အိမ် အသစ်ကို မ၀င်ခင် စကားများခြင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်း မလုပ်ရ တဲ့။ နောက်ထပ် သိသင့်တာတွေ ရှိရင် ပြောသွားကြပါဦး။
Posted by မီယာ 13 comments: Links to this post
ငယ်ငယ် ကတည်းက အပြောင်း အရွှေ့ဆို သိပ် ဘ၀င် မကျ ချင်ပါဘူး။ နေရာ အသစ်ကို ပြောင်းရမှာ အရမ်း ကြောက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကွဲသွားမှာကို စိုးရိမ်တာက ထိပ်ဆုံးကပေါ့။ နေရာသစ်မှာ ဘာတွေ ရင်ဆိုင် ရမလဲကို တွေးပြီး ကြောက်တာလည်း ပါတယ်။ ကြောက်ကြောက် နဲ့ပဲ စွန့်စားပြီး နိုင်ငံ ရပ်ခြား အထိ ထွက်လာခဲ့တယ်။ မျက်ကန်း တစ္ဆေ မကြောက် ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျောင်းပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အသီးသီး တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ရှာဖို့ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ထွက်သွားကြတာ အကြောက်ကြီးတဲ့ ကိုယ်တို့ ကတော့ ကျောင်းတက်တဲ့ ဒီမြို့မှာပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ရောက်ကတည်းက နေတဲ့ အိမ်မှာပဲ ဆက်နေခဲ့တယ်။
ဒီအိမ်မှာ နေရတာ လုံခြုံပါတယ်။ အိမ်ရှင်နဲ့ နေရတာ ဆိုပေမယ့် လူကြီးတွေချည်းပဲမို့ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် လည်း ရှိပါတယ်။ တနင်္လာကနေ သောကြာအထိ နေ့ဆို အပြင်ထွက်ပြီး ညနေမှ ပြန်လာတာမို့ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ သိပ် လည်း စကား မပြောဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်လခ ပေးတဲ့ အချိန်လောက်ပဲ ထွေရာလေးပါး ပြောဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် မီးဖိုခန်းနဲ့ ကိုယ်မို့ စားချင်တာလည်း ချက်စားလို့ ရတယ်။ တခါတလေ သူတို့ ခရီးသွားရင် တအိမ်လုံးမှာ ကိုယ်တို့ လင်မယား နှစ်ယောက်ထဲ။ အဲ့ဒီလို အချိန်မျိုးဆို ကိုယ်ကတော့ countryside မှာ cottage လေးငှားနေတာလို့ ကြံဖန်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်က သူတို့ ဧည့်ခန်းမှာ အချိန်မရွေး လာထိုင် နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် တခါမှ စိတ်လို လက်ရ သွားမထိုင် ဖြစ်ပါဘူး။ အပြင်က ပြန်လာတာနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲမှာ ရေ သွားသောက်တယ်၊ ပြီးတာနဲ့ အိပ်ခန်းထဲ တန်းဝင်တာပဲ။ စာဖတ်ချင်ရင် ပိုနွေးတဲ့ မီးဖိုခန်းထဲ သွားထိုင် နေလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နေလာတာ ၈နှစ် ကျော်သွားပြီ။ ကိုယ်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခန်းလေး ထဲမှာ ၈နှစ်ကြာ စုဆောင်းထားတဲ့ ပစ္စည်း တွေလည်း အတော်လေး များနေပြီ။ အိမ် ကလည်း အရင်လို သိပ် မတိတ်ဆိတ် တော့ပါဘူး။ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရ အိမ်ရှင် ကလည်း ရရင် ရသလို ဧည့်သည်တွေ လက်ခံ လာပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေနဲ့ မတွေ့တာ များပေမယ့် တခါတလေ မှာတော့ စပ်စပ်စုစုနဲ့ ကိုယ်တို့ အခန်းတံခါး လာဖွင့်တတ်တဲ့ ဧည့်သည် တွေနဲ့လည်း တိုးတတ် ပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ရတာ မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်ဖာသာ နေဖို့ အကြောင်းဖန် လာတယ် လို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။ စက်တင်ဘာဆို ကျောင်းသားတွေနဲ့ အိမ်တွေက ပြည့်လေ့ ရှိပါတယ်။ မ၀ံ့မရဲနဲ့ပဲ တရက်မှာ အိမ်ငှား အရှာ ထွက်လိုက်တာ မသိသေးတာ တွေလည်း အများကြီး သိလာရတယ်။ no children no pet မို့ အိမ်ရှင်တွေက သဘောကျ မှာပါတဲ့။ တအိမ်ထဲမှာပဲ ၈နှစ်ကျော် နေခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း အိမ်ရှင်တွေက နှစ်သက် မှာပါတဲ့။
နှစ်ယောက်တည်း နေဖို့အတွက် ပေးဆပ် ရမှာ တွေကတော့ မနည်း ပါဘူး။ အိမ်လခ၊ ရေဖိုး၊ မီးဖိုး၊ တီဗီလိုင်စင် အင်တာနက်၊ ဖုန်းဖိုး၊ မြူနီစပယ် အခွန် စတဲ့ မြောက်မြား လှစွာသော အပို စရိတ်တွေ ကုန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းမယ့် နေရာက ဝေးရင် ခရီး စရိတ်က ထောင်းဦးမှာပါ။ လူမျိုးခြားတွေ သိပ်မရှိတဲ့ ရပ်ကွက်မျိုး ဆိုရင်လည်း သတိထား နေရဦးမယ်။ ညဘက် တယောက်တည်း အိမ်ပြန်လာရင် လူတကောင် ကြောင်တမြီးမှ မတွေ့ရတဲ့ နေရာမျိုး ဆိုလည်း ကိုယ့်စိတ်က လုံခြုံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေ တွေးပြီး လက်ရှိနေရာမှာပဲ မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး ဆက်နေရ မလား လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီး ၃လ အကြာမှာ အခုနေတဲ့ အိမ်ကို ရောက်တာဆိုတော့ နှစ်ယောက်တည်း အတူ နေခဲ့ဖူးတာ ၃လပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ လက်ထပ် ပြီးပြီးချင်း နှစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ ၃လမှာ စိတ် ချမ်းချမ်း သာသာ နေရတာ ပြန် သတိရ နေတယ်။ (မချမ်းသာ တာတွေလည်း ရှိပါတယ် နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက် နောက်မှ ရေးထားဦးမယ်။) အခုတခါ နှစ်ယောက်တည်း နေရ ပြန်ဦးတော့မယ်။ ဘ၀ခရီးလမ်းက အပြောင်း အရွှေ့အကွေ့ တကွေ့ပေါ့။
Posted by မီယာ 15 comments: Links to this post
Let's Make Someone Happy
What is my plan? - What is my plan? Yes, it isasort of idiotic question. Who will answer it? Nobody. I have been in Britain for overadecade, during which period I encount...
Sandar Cho's Confessions
Current matter - Today, I metaBurmese girl. I have spoken out what I have faced. Her response is quite supportive to me, not what I expected before. The thing I spoke out...
Warm wishes (6)
I love reading blogs and meeting new friends.